Izvi zvakavanzika Gwaro rinotaura sei kushandiswa uye anodzivirira chero ruzivo kuti ukapa kana ukashandisa website iyi. iri vakazvipira nechokwadi kuti zvauri achachengetwa. Tinofanira kukumbira iwe kupa vamwe ruzivo yamunofanira vangazivikanwa paaishandisa website iyi, zvino unogona kuva nechokwadi kuti zvichaita chete kushandiswa maererano ichi oga aya. kungachinja mutemo uyu nguva nenguva kuburikidza updating peji ino. Unofanira kuongorora peji ino nguva nenguva kuti ave nechokwadi chokuti uri kufara chero kuchinja.
What isu unganidza
Tinogona unganidza zvinotevera mashoko:
taura mashoko kusanganisira kero ye email
wevanotungamirira mashoko akadai Postcode, zvatinofarira uye zvaunofarira
mamwe mashoko akakodzera kuti mutengi kuongorora uye / kana kuti asaita
Nokuti mishoma makeke tiri kuunganidza kuona List makeke isu unganidza chikamu.
Zvatinoita mashoko atinowana
Isu zvinoda ruzivo urwu kuti anzwisise zvaunoda uye kukupa basa ari nani, uye zvikurukuru nokuda kwezvikonzero zvinotevera:
Internal kuchengeta zvinyorwa.
Tinogona kushandisa mashoko kuvandudza zvigadzirwa edu uye mabasa.
Tinogona vanogona kutumira promotional na pamusoro zvigadzirwa zvitsva, anokosha inopa kana mamwe mashoko dzatinofunga ungawana zvinonakidza kushandisa email kero zvamakarongedza akapa.
Nguva nenguva, tinogona kushandisa ruzivo rwako kuonana imi pakutsvakurudza pamusika zvinangwa. Tinogona kutaura kwamuri email, runhare, Fax kana tsamba. Tinogona kushandisa mashoko gadzirisa mashoko Website maererano nezvido zvako.
Tiri vakazvipira nechokwadi kuti mashoko ako yakachengeteka. Kuitira kudzivisa mvumo kuwana kana kuburitsa, takaisa panzvimbo yakakodzera mumuviri, zvemagetsi uye managerial maitirwo ezvinhu kudzivirira uye hwakachengeteka mashoko isu unganidza paIndaneti.
Sei isu kushandisa Cookies
A kudzayi duku faira iyo anokumbira mvumo kuiswa zvakaoma ngarurege kombiyuta yako. Kamwe uchibvumirana, faira iri wakawedzera uye kudzayi kunobatsira ongorora padandemutande motokari kana anoita munoziva paunenge shanyira imwe nzvimbo. Cookies kubvumira padandemutande chikumbira kupindura kwauri somunhu oga. Web Chikumbiro inogona kuchinja remapazi ayo nezvaunoda, zvaanoda nezvaasingadi kuburikidza achiunganidza uye kuyeuka mashoko pamusoro zvaunofarira.
Tinoshandisa motokari nerogi evästeet kuziva izvo mapeji dziri kushandiswa. Izvi zvinotibatsira kuongorora mashoko pamusoro-web peji motokari uye kuvandudza Website kwedu kuti titaure kuti vatengi zvinodiwa. Isu chete kushandisa mashoko aya kuti nhamba pachisara zvinangwa uye ipapo mashoko yabviswa kubva hurongwa.
Yose zvayo, Cookies kutibatsira kukupa Website nani, nokuita nesu kuongorora izvo mapeji ukawana kubatsira uye izvo zvaunoita kwete. A kudzayi hakuna nzira zvinotipa kuwana kombiyuta yako kana ruzivo pamusoro penyu, kunze mashoko yaunosarudza tisazovakumbira. Unogona kusarudza kubvuma kana kuramba makeke. Most padandemutande browsers vapiwa kubvuma makeke, asi unogona kazhinji yokugadziridza yenyu mubrowser marongero kuramba mabhisikiti kana uchida. Izvi zvinogona kunokutadzisa kutora zvizere Website.
Website yedu ingasanganisira anobatanidza vamwe Websites mhindu. Zvisinei, kamwe iwe vakashandisa Links izvi kusiya yedu yepaIndaneti, unofanira kuona kuti isu vasina kudzora kuti dzimwe Website. Naizvozvo, hatigoni kuva anokonzera kudzivirirwa uye toga chero mashoko rwamakandida zvinopa ndikarega kushanyira nzvimbo dzakadaro uye nzvimbo dzakadaro havasi anodzorwa ichi oga mutsara. Unofanira kungwarira uye kutarisa voga mashoko kushanda Website vari mubvunzo.
Kudzora mashoko ako pachako
Unogona kusarudza kurambidza muunganidzwa kana kushandisa mashoko enyu pachako nenzira dzinotevera:
pose ukakumbirwa kuti zadza muchimiro pamusoro Website, tsvaka bhokisi kuti unogona baya kuratidza kuti haudi mashoko ichashandiswa munhu nokuda zvakananga yokutengesa zvinangwa
kana iwe kare vakabvuma kwatiri kushandisa ruzivo rwako pachavo nokuda zvakananga yokutengesa zvinangwa, unogona kushandura pfungwa dzako chero nguva nokunyorera kana emailing nesu panguva sales@armati.biz
Hatidi kutengesa, ugovere kana risi mashoko ako pachako kumapati rechitatu kana tine mvumo yako kana uri nomutemo kuita kudaro. Tinogona kushandisa mashoko enyu pachako kukutumirai promotional mashoko pamusoro mapato yechitatu dzatinofunga ungawana zvinonakidza isu kana ukaudza zvamunoda kuti izvi zviitike.
Unogona kukumbira mashoko mashoko pachedu izvo tikabatisisa pamusoro penyu pasi Data Protection Act 1998. A duku muripo achava kunyorerwa. Kana uchida kopi mashoko musi iwe tapota nyorera.
Kana uchitenda kuti chero mashoko tiri vakabata pamusoro penyu isiriyo kana kukwana, tapota nyorera kana paemail isu nokukurumidza, pakero iri pamusoro apa. Ticharamba takurumidza gadzirisa mashoko chero vakawana kuti kururama.
List makeke isu unganidza
Tafura pazasi rinotaura Cookies isu kuunganidza uye chii mashoko anounganidza.
Kuwadzana mungoro yenyu yekutengera.
Mirayiridzo muchikwata Info papeji, kuti anobvumira kuti nokukurumidza kuratidza mapeji.
Zvinhu zvaunazvo muna Enzanisa Products nyora.
Your vaifarira mari
An encrypted shanduro hwako mutengi ID pamwe kuchitoro.
An chokukomborerwa kana rauri Logged kupinda muchitoro.
An encrypted shanduro mutengi boka muri.
Mirayiridzo mutengi chidimbu ID
A mureza, izvo zvinoratidza kuti caching iri akaremara kana kwete.
Iwe sesssion ID pamusoro Server.
Rinobvumira vaenzi aongorore mirairo yavo.
Muchikwata wokupedzisira mukauya.
The chinonyanya zvichangobva chigadzirwa imi vakaona.
Kunoratidza kuti shoko idzva yave kugamuchirwa.
Kunoratidza kana anobvumirwa kushandisa cache.
A kubatana mashoko pamusoro pengoro kwako uye kuona nhoroondo kana wakumbira nzvimbo.
The ID chero sarudzo kwauchangobva zvokusarudzwa mukati.
Information chii musarudzo imi akavhotera pamusoro.
Zvinhu kwauchangobva kuenzaniswa.
Information pamusoro zvigadzirwa iwe emailed neshamwari.
The chitoro maonero kana mutauro wasarudza.
Kunoratidza kuti mutengi akabvumira kushandisa makeke.
Zvigadzirwa kwauchangobva kuonekwa.
An encrypted pamazita zvigadzirwa akawedzera Wishlist yenyu.
Kuwanda zvinhu munyika Wishlist yenyu.